तपाईहरुको जोडी कस्तो नसुहाएको भाउजु कति मोटी भनेपछि तनावमा शिशिर भण्डारी(भिडियोसहित):: Mero Desh
तपाईहरुको जोडी कस्तो नसुहाएको भाउजु कति मोटी भनेपछि तनावमा शिशिर भण्डारी(भिडियोसहित)
Published on: १३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०७:१२
काठमाडौं ।शि’शिर भण्डारीले नयाँ युट्युब च्यानलको थालनी गरेका छन् । जसको नाम हो, शिशिर भण्डारी इन्टरटेनमेन्ट । लकडाउनको समयमा घरमै बसेर बिरक्त भएका दर्शहरुका लागि मनोरन्जन दिनका लागि उनले उक्त च्यानल खोलेको बताएका छन् ।
जसमा उनी श्रीमती अप्सरा गौतम भण्डारी र उनको बिभिन्न पारिवारिक भ्लगहरु प्रस्तुत ग’रिन्छन् ।२०६७ सालमा बिहे गरेका शि’शिरको दुई सन्तानहरु छन् । उनी बिभिन्न रमाईला क्विजहरु, गेमहरु र अन्य सामग्रीहरु च्यानलबाट प्रस्तुत गद्र्यै आईरहेका छन्
र दर्शकहरुले मन पनि पराईहेका छन् ।यसैबिच दर्शक हरुले कमेन्ट गरेका प्रश्नहरुको उत्तर दिदै शिशिर र उनकी श्रीमतीले एउ’टाभिडियो निर्माण गरे ।
जसमा शिशिर र उनको श्रीमतीले निर्धक्क रु’पमा दर्शक हरुको प्रश्नहरुको उत्तर दिए। तपाईहरुको प्रेम कसरी बस्यो, बिहे कसरी भयो ल’गायतका अन्य प्रश्नहरुको उत्तर दिदै गर्दा एउटा अनौठो प्रश्नको सामना उनीहरुले गर्नु पर्यो ।
जुन प्रश्न रहेको थियो, तपा’ईहरुको जोडी कस्तो नमिले को, भाउजु कति मोटी ? त्यसपछि शिशिर र उनकी श्रीमतीले के उत्तर दिए ।
साउदिमा एक नेपाली युवा मृ’त्यु सँग जुध्दै गरेको भिडियो भा’इरल, तर उद्दार अझै भएन(भिडियो सहित)
एक प्रहरीले बर्दिमा नै मोबाईल चो’रे भिडियो भा‘ईरल!
कैलालिमा मोबाइल पसलमा छापा हान्न गएको प्रहरि हवाल्दार उल्टै मोबाइ चोर्दै गरेको भिडियो भयो भाइरल (भिडियो सहित)